Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akwụkwọ akụkọ USA » A na-ebelata njem njem maka njem ndị ọzọ na Hawaii
Akụkọ Mgbasa Ozi Hawaii • HITA • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Hotels & Ebe ntụrụndụ • Kamaainas • News • Iwughachi • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Akwụkwọ akụkọ USA • Akụkọ dị iche iche
Hawalọ Hawaii na Senate mere ụnyaahụ iji kpochapụ Gover David Ige na veto nke Billlọ Bill 862 na nnukwu akụkụ metụtara njem. Kpọsị ruo na mmefu ego nke Hawaii Tourism Authority (HTA) na-aga, ụgwọ a ga-ebelata mmefu ego ahụ site na US $ 79 ruo US $ 60 na ibelata ọrụ na ọrụ ndị ọrụ.
HTA ga-arịọrịrị ego n'aka ndị omeiwu kwa afọ dị ka ụlọ ọrụ ndị ọzọ na steeti.
Billgwọ ahụ na-ekenye $ 60 nde site na American Rescue Plan Act maka afọ ụlọnga ugbu a.
Ejikọtakwara na ụgwọ ahụ bụ mgbanwe na ụtụ ebe obibi ndị na-adịghị agafe agafe nke ga-efu ndị njem nleta karịa ịnọ na họtel.
Billlọ Bill 862 na-akagbu oke ego ụtụ isi na-anaghị agafe agafe na mpaghara ma nye ha ikike ịmebe ụtụ isi ụlọ na-agaghị akwụ ụgwọ karịa pasent 3 n'elu ụtụ ụlọ nkwari akụ steeti nke 10.25.
Ọ na-agbaghakwa TAT-enweta ego njem njem pụrụ iche ma weghachite oke ụgwọ ụgwọ maka onye isi ala na onye isi ọrụ nke HTA rụọ ọrụ na Jenụwarị 1, 2022. Nke a bụ isi iyi ego HTA.
Tụkwasị na nke a, ọ na-agbaghapụ ụgwọ HTA site na koodu ịzụta ọha na eze ma na-ebelata ntinye ego ntinye ego maka ụlọ ọrụ mgbakọ nke ụlọ ọrụ mgbakọ pụrụ iche.
Onye isi steeti Sylvia Luke (D), nke na-anọchite Punchbowl, Pauoa, na Nuuanu, kwuru na ịkagbu veto bụ na ọ na-akwụ ndị njem njem ụgwọ ka ha wee nwee ike inye aka kwụọ ụgwọ maka akụrụngwa ha ji. O kwuru na Taxtụ Ulo Obibi - ma ọ bụ ụtụ ụlọ nkwari akụ - mmụba nke pasent 3 ga-eme nke a. Na mgbakwunye, ụtụ ụgbọ ala mgbazinye ego ga-ebulite n'aha njikwa njem nlegharị anya.
State Rep. Gene Ward (R), na-anọchite anya Hawaii Kai na Kalama Valley, tozuru oke imebi iwu ahụ na-ekwu na ụgwọ ahụ na-ezigara HTA ozi na ha enweghị mmasị n'ụzọ ha si ejikwa akụkụ ha na njem Hawaii.